ओहो ! ब ला त्कारी जस्तोसुकै ठूलो मान्छे भएपनि फाँ सी नै दिनु पर्छ,झु न्डाएर समाजमा ते र्साउन पर्छ भन्दै आइन् जय नारी अभियानता सावित्री (भिडियो हेर्नुस्) – Sandes Post
ओहो ! ब ला त्कारी जस्तोसुकै ठूलो मान्छे भएपनि फाँ सी नै दिनु पर्छ,झु न्डाएर समाजमा ते र्साउन पर्छ भन्दै आइन् जय नारी अभियानता सावित्री (भिडियो हेर्नुस्)
March 31, 2022 989
केही समय अघिबाट नायक तथा मोडल पल शाह र गायिका समिक्षा अधिकारिको सम्बन्धलाई लिएर निकै चर्चा हुँदै आएको छ । संगितिक क्षेत्र नै तरङित बनाएको यश घटनामा दिन प्रतिदिन एक पछि अर्को रहस्य बाहिर आउने क्रम भै रहेको छ । विभिन्न मिडियामा पल र समिक्षाको बारेमा खबरहरु आए पछि र केही दिन अघि समिक्षाले अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरे पछि त्यसको खण्डन गर्दै पलले निकै लामो अपिल फेसबुकमा लेखेका थिए । मिडियामाले झुटो खबर फैलाएको उनले भनेका थिए ।
साथै समिक्षालाई उकासेर आफ्ना सहयात्री साथिहरुले नै आफुलाई फसाउन खोजेको प्रमाण आफुसगँ भएको र आवाश्यक परे त्यो उपलब्ध गराउने पलले बताएका थिए । केही दिन अघि पल र समिक्षाको यश बिबाद समाधान हुन लागेको खबर पनि मिडियामा आएको थियो । तर जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा गायिका समिक्षा अधिकारिले पल साह विरुद्ध ब’ला’त्का’रको मुद्दा दायर गरे पछि भने अहिले यश घटनाले अर्को चर्चा पाएको छ । यसै बिच पलले आफू विरुद्ध ष’ड्य’न्त्र रचिएको बताएका छन ।
यश अघि कसैको नाम नतोकेका पलले आफू विरुद्ध मु’द्दा दायर भए पछि भने १ मिनेट देखि १५ मिनेट सम्मका ५ वटा अडियो रेकर्ड सहित आफुलाई फ’साउन खोजेको भन्दै प्रमाण स्वरुप देखाएका छ । उनले आफू विरुद्ध गायक दुर्गेश थापा, सरोज ओलि, कृष्ण जोशी सम्राट चौलागाईंले समिक्षासगँ मिलेर ष’ड्य’न्त्र रचेको भन्दै नाम सहित अडियो रेकर्ड पनि बाहिर ल्याइदिएका छन । पलले बाहिर ल्याएको अडियो रेकर्डमा उनिहरुले योजना बनाउदै गरेको सुनिएको छ ।
पल र समिक्षाको यश बिषयमा कुराकानी भै सहमती हुने कुरा बाहिर आए पछि दुर्गेश थापा लगायतको टोलिले पुन समिक्षासगँ मिलेर पल साहलाई फसाउन योजना बनाएको अडियो रेकर्डमा सुन्न सकिन्छ । दुर्गेश थापा त्यसमा निकै सक्रिय रहेको अडियो रेकर्डमा सुन्न सकिन्छ । यता दुर्गेश थापा सहित समिक्षासगँ मिलेर पल विरुद्ध योजना बनाउने कृष्ण जोशी भने कलाकार पल शाह कै म्यानेजरको रुपमा काम गर्दै आएका ब्याक्ती हुन । यश अघि पलले आफ्नै प्रतिस्पर्धी सहकर्मी साथिहरुले आफुलाइ फ’साउन खोजेको बताएका थिए ।
अहिले समिक्षा र पलको पक्ष विपक्षमा विभिन्न टीका टिप्पणी हुँदै आएको छ । ना’बालिक उमेर भएकी हुनाले पल र समिक्षाको सहमती मै शा’री’रिक स’म्बन्ध भएको भए पनि त्यो ब’ला’त्का’र ठ’ह’रि’ने भएकोले पललाई कार्बाही हुनु पर्ने कतिपयको भनाई छ । कतिपयले भने योजनाबद्ध तरिकाले पललाई फ’साउन समिक्षाको प्रयोग गरेको र पछि आर्थिक कारोबार समेत समिक्षा लगायतले गर्ने खोजी नमिले पछि ब’ला’त्का’र’को आ’रो’प लगाएको भन्दै समिक्षा र उनिहरुको टोलिलाइ स’जा’य हुनु पर्ने बताएका छ्न ।
Prevसु सा इ ड नोट लेखेर चिकित्सकले गरिन आ त्म ह त्या, नोटमा लेखिएको शब्दले सबैलाई रुवायो
Nextआज बाट ग्याँस बिक्री वितरण बन्द, पेट्रोल पनि बन्द गर्ने चेतावनी !